အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်: ကြယ်တွေစုံတဲ့ညရဲ့ အလွမ်း
43 Responses to “ကြယ်တွေစုံတဲ့ညရဲ့ အလွမ်း”
အိမ်နဲ့ဝေးနေသူချင်မို့ ခံစားချက်တွေလည်းတူပါ့ ကျနော်လည်း လသာတဲ့ည ကြယ်စုံတဲ့ညတွေဆို ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်ရမှာတောင်ကြောက်တယ် ဘာကိုလွမ်းမှန်းမသိပဲ လွမ်းလွန်းလို့ ။
လွမ်းစရာကောင်းတဲ့ ညတွေ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။
အိမ်မပြန်နိုင်သေးသ၍ တစ်ယောက်ထည်း ထိုင်ငေးရတော့မှာပေါ့။
အမြဲတမ်းကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့် ကြယ်လေးတွေကိုငေးပြီး ခံစားချက်တွေကိုတော့ သူတို့လေးတွေကို တိုးတိုးလေးပြောနေမိခဲ့တာ...ဟူးးးးးးးးးးး
“ကျွန်မလွမ်းတာထက် ကျွန်မရဲ့မိဘတွေ ကျွန်မကိုလွမ်းနေတာကို ပိုပြီး သက်သာစေချင်တယ်။
ကျွန်မက ကျွန်မရဲ့မိဘတွေကို လွမ်းတာထက် အိမ်ပြန်ဘို့ အလှမ်းဝေးသူတွေ သူတို့မိဘတွေကို လွမ်းရတဲ့ အလွမ်းတွေကို သက်သာစေချင်တယ်။
ကျွန်မရဲ့ မိဘတွေ ကျွန်မကိုလွမ်းတာထက် ပြန်လာဘို့အလှမ်းဝေးတဲ့ သူတွေရဲ့ မိဘတွေက သူတို့ရဲ့ သားသမီး အိမ်ပြန်ဘို့အလှမ်းဝေးသူများစွာကို အလွမ်းကိုသက်သာစေချင်တယ်။”
...........ဆိုတဲ့ အိမ်အလွမ်းတွေကို ကိုယ်ချင်းစာရေးဖွဲ့ထားတဲ့ မေတ္တာတွေကို ကျေးဇူးတင်မိတယ်။
ဒီနေ့ အစ်မရဲ့ မွေးနေ့လို့ သိရပါတယ်..
မွေးနေ့မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ပါစေနော်။ မချောရဲ့ ဆန္ဒအားလုံးပြည့်ဝပါစေ။
အိမ်ကိုလည်း အမြန်ဆုံး ပြန်နိုင်ပါစေလို့ ညီမ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
မချောအတွက် ကြယ်တွေစုံတဲ့ညတိုင်းကို ကြုံတွေ့ခွင့်ရပါစေ။
ကိုငှက်ကြီး သီချင်းလေးက အခုလို နေ့ရက် အချိန် မှာ ပိုပြီးလွမ်းနေမိမှာပါပဲ
ကိုယ်ချင်းစာ နားလည်မိပေမယ့် ဘာများတတ်နိုင်ပါ့မလဲလေ.......
ဒါလေးတွေ အသာထားလို့.... "နောက်နောင် မွေးနေ့တွေမှာ မချော ချစ်ရတဲ့ မိသားစုတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲနိုင်ပါစေဗျာ"........
comment တွေဖတ်ရင်း မချောမွေးနေ့ဆိုတာ သိလိုက်ရလို့ ဆုတောင်းပေးသွားပါတယ်။
ယနေ့ကြရောက်သော မွေးနေ့မှသည် နောင်လာမယ့် နှစ်များစွာမှာ
ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ အေးချမ်းသာယာသော ဘ၀ အားထာဝရ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ မချော ရေ။
ပြန်မှ ပြန်မှ ညီမလဲ အိမ်လွမ်းနေတယ်..
သြော်...အနုပညာပိုးရှိပြီး ထက်ပါတယ်အောက်မေ့နေတာ..မချောက မျိုးနဲ့ရိုးနဲ့ကိုး..။ဘာတဲ့..။
“သမီးကို မွေးတုန်းက ကောင်းကင်မှာ လကလည်းသာ၊ ကြယ်တွေဆိုလည်း စုံလိုက်တာ သမီးရယ်.. အဖေတောင် သမီးကို ပွေ့ပြီး ခေါ်ပြမလားတောင် တွေးမိတယ်.. နောက်တော့မှ သမီးက မွေးစလေး ရှိသေးတာ.. ဘယ်မြင်နိုင်မလဲလို့ စဉ်းစားမိတော့တာ။ ”
စာဖတ်ပြီး...ပြန်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ပိုခိုင်မာသွားဘီ......း)
တူတူပဲ ချောရေ ... အိမ်ကို လွမ်းတဲ့ ခံစားချက်ချင်းက အဝေးရောက် သားသမီးတွေ အတွက် တူတူချည်းပါပဲ။
ကြယ်တွေစုံလဲ လွမ်းတယ် ... ကြယ်ရောင်ပျောက်လဲ လွမ်းတယ် ...
လသာညလဲ လွမ်းတယ် ... လမိုက်ညလဲ လွမ်းတယ် ...
နေသာလဲ လွမ်း ... မိုးရွာလဲလွမ်း ...
တလွမ်းထဲ လွမ်းနေတော့တာပါပဲ ... :(
ဒီနေ့ ချော မွေးနေ့လား ... မင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ ပြည့်စုံတဲ့ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေနော် ....
♫♫ ကြေကွဲခြင်းနဲ့ ငိုရှိုက်ခဲ့ညတွေ ဘယ်သူသိနိင်မလဲ
ကြည်လင်ဖြူစင်တဲ့ ကောင်းကင်မှာ ကြယ်ရောင် လင်းလက်တောက်ပဆဲ..♫♫
♫♫ အိပ်မပျော်တဲ့ညတိုင်း တွေးများနဲ့ ငါဟာ အိမ်ကို လွမ်းနေသူ ♫♫
ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ဘယ်တော့များရောက်လာမလဲနော်.. အားလုံးက အိမ်နဲ့ ခွဲနေရတာတွေမို့လို့ တကယ်ပဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ် အမရယ်..
ဒါနဲ့ ဒီနေ့ မချော မွေးနေ့ဆို.. Happy Birthday နော်.. မွေးနေ့မှာ ထင်တာထက်ပို ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာ.. :)
ကြယ်တွေ စုံစုံမစုံစုံပါ အိမ်ကိုတော့ သတိတွေအမြဲရနေမိတယ်ချောရယ်....
ကြယ်တွေစုံတဲ့ ည အမေ့အိမ်ကိုလွမ်းတယ် အမေ့ကိုလည်းလွမ်းတယ် :(
ကြယ်တွေစုံတဲ့ည မှာ အိမ်ကို လွမ်းရတာလည်း အရသာတစ်ခုပေါ့...
Happy Birthday မချော..
May your dream come true...
အိမ်ကိုလွမ်းတဲ့အကြောင်းတွေ ဖတ်ရတိုင်း ထိထိရှရှဖြစ်ရတာက ဘဝတူတွေ များနေလို့ပါပဲ။
ပြန်ချင်ရဲ့နဲ့ မပြန်နိင်သေးသူတွေ မရေတွက်နိင်တော့ဘူး။
သိပ်ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းတာက အချိန်တွေက အဝေးရောက်နေသူတွေကို မစာနာဘူး။ တရွေ့ရွေ့နဲ့ ကုန်ဆုံးနေတာပဲ။ ပြန်ဆုံချိန်ရောက်တော့ အချိန်တွေက သိပ်နဲနေပြီ..။
တချို့တွေကတော့ ပြန်ဆုံချိန်တွေကိုတောင် မမှီနိင်တော့ပါဘူး။။။
ဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေလည်း နေ့သစ်တွေနဲ့ အတူ ရောက်လာပါစေ။
HAPPY BIRTHDAY ပါ မချော။
မိဘမောင်နှမတွေစုံစုံညီညီနဲ့ ပျော်ရွှင်ဖွယ်မွေးနေ့တွေ ဘ၀မှာ ဆုံဆည်းရဦးမှာပါ ညီမရေ..။ အိမ်နဲ့ဝေးသူတွေရဲ့အလွမ်းကို စာနာမိရင်း ဒီပို့စ်လေးကို ခရက်ဒစ်ပေးချင်ပါတယ်။
:).....မရေ..... ရောက်လာတာ အရမ်းနောက်ကျခဲ့ပေမဲ့ နေ့ မကူးသေးလို့ 
တော်သေးတယ်။ "HAPPY BIRTHDAY" ပါမမရေ။
ဒီနေ့ ကလေးမှာ ပြည့်မြောက်တဲ့ မမရဲ့ မွေးနေ့ ရက်မြတ်လေးမှသည်
နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် စိတ်၏ ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ ကျန်းမာခြင်းနှင့်
ပြည့်စုံပြီး လိုရာဆန္ဒတွေ ပြည့်နိုင်ပါစေလို့ဒီက မွေးနေ့ ရှင်လေးးကလည်း
မြတ်ဘုရားထံမှာ ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးသွားပါတယ်ရှင်။ :)
ံHappy Birthday ချောရေ။
ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ မွေးနေ့ ဖြစ်ပါစေ၊ အသက်ရာကျော် ရှည်ပါစေဗျာ ...
ကြယ်တွေစုံတဲ့ညမှာ ကောင်းကင်ကြီးမော့ကြည့်ဖူးတယ်။ အလုပ်ကိစ္စတွေနဲ့ လပ္ပတ္တာက ရန်ကုန်ကို ပြန်လာတုန်း ညကပေါ့။
နောင်လာမယ့် မွေးနေ့တိုင်းမှာ အရာရာပြည့်စုံပါစေနော်။
ဒီစာလေး ဖတ်ပြီးတော့ ဝရံတာလေးမှာ ထိုင်ထိုင်နေတတ်တဲ့ အဖေ့ ရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေ
သာသနာ အတွက် အမြဲတမ်း အလုပ်ရှုပ်နေတတ်တဲ့ အမေ့ ရဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေ ကို
တစ်နေ့နေ့တော့ မောင်နှမတွေ အားလုံး စုံစုံညီညီ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် နဲ့ပြန်ဆုံနိုင်ကောင်းပါရဲ့နော်။
ပြန်ချင်တယ် မချောရာ...။ညဘက်တွေမှာ အပြင်ကိုလမ်းလျောက်ထွက်ဖြစ်တိုင်း ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ကို
နားထောင်ဖြစ်တယ်...။ကောင်းကင်ကြီးကိုလည်း မော့ကြည့်ဖြစ်တယ်...။အဲ့ဒီလိုအချိန်မှာ ရင်ထဲက အိမ်လွမ်းစိတ်တွေနဲ့ လူတောင်ရူးမတတ်ခံစားရတယ်ဗျ...။ခုလည်း အစ်မပို့စ်လေးဖတ်ရတာ လွမ်းလိုက်တာ..။
(မွေးနေ့ မှာ ပျော်ရွင်ပါစေနော်....)
ကိုငှက်ကြီး သီချင်းတွေနားထောင်ရင်း အမေ့ကိုသတိရတယ်၊ လွမ်းတယ်၊
မချောရဲ့ “ကြယ်တွေစုံတဲ့ညရဲ့အလွမ်း”ကိုဖတ်ပြီး အမေ့ကို ပိုလွမ်းတယ်၊
မချော နောက်နှစ်မွေးနေ့တွေမှာ မချောဖေဖေ၊ မေမေတို့နဲ့ ထမင်းလက်ဆုံစားနိုင်ပါစေနော် .. ဆုတောင်းပေးပါတယ်။
Happpy Birthday to you!!!
ဆန္ဒခပ်သိမ်း ပြည့်စုံပါစေ။ စိတ်နှလုံးချမ်းမြေ့ပါစေ..
ကြယ်တွေစုံတွေညတွေ အိမ်ကိုလွမ်းတယ်၊ ကြယ်မစုံပဲ မှောင်မိုက်တဲ့ညတွေလည်း အိမ်ကိုလွမ်းတယ်..
မချောချစ်တဲ့ နွေးထွေးတဲ့မိသားစုနဲ့အတူဘ၀ကို ကြယ်တွေစုံလင်စွာနဲ့
အော်...ငါ့အစ်မက အိမ်ကိုလွမ်းနေတာကိုး..... ဘဝတူတွေပါပဲ အမချောရယ် အနော်လည်း လွမ်းလို့ :(
ဖေ့ဘွတ်မှာသော်လည်းကောင်း၊ ဘလော့ဂ်ပေါ်တွင်လည်းကောင်း၊ စီဘောက်နှင့် အီးမေလ်းစသည်တို့နဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးကြတဲ့ ချစ်သော ညီအစ်ကိုမောင်နှများ အားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးပါနော်.. ဆုတောင်းပေးသူများနဲ့ အလည်လာကြသူများ အားလုံးလည်း ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ၊ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ ဆုတောင်းမေတ္တာ ပို့သအပ်ပါတယ်ရှင်။
Good tal byar ......... Go On .....
အစ်မရေ.. အိမ်နဲ့အဝေးမှာ နေရတဲ့သူမို့ အစ်မပို့စ်လေးကို ဖတ်ရှုခံစားသွားပါတယ်.. မိသားစုတွေ အမြဲအတူတကွနေရပါစေလို့ ဆုတောင်းမိပါတယ်..
အိမ်ကိုလွမ်းတယ်ဆိုတာ အိမ်နဲ့ဝေးဝေးမှာနေဘူးမှ တကယ်ခံစားသိရတာ။ စာဖတ်ပီးဖတ်ကောင်းလို့လွမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး ကိုယ်တိုင်းလည်းတချိန်က အိမ်နဲ့ခွဲပီးဘ၀အတွက်သူများဆီမှာ အိမ်နဲ့ခွဲပီးသွားနေခဲ့ရဘူးတယ် အခိုက်အတန့်တခုထိပေ့ါ။
ဆိုလိုတာက အိမ်လွမ်းတယ်ဆိုတာကို နင့်နင့်သီးသီးခံစားခဲ့ရဘူးလို့ ဒီစာဖတ်မိတော့အဟောင်းတွေတောင် အသစ်ဖြစ်လာတယ်.။ ဘ၀မှာဒီတစ်ခါပဲ ပညာရေးအတွက်သူများဆီမှာနေခဲ့ရတယ် တခါဆိုတခါမှတ်အောင်ခံရတယ်။ တစ်ခါဆိုတစ်ခါ အိမ်ကိုသေလောက်အောင်လွမ်းတယ်။ ခုဒီစာကိုဖတ်ပီးတော့အရင်တုန်းက ခံရတာတွေပြန်တောင်လွမ်းလာတယ်။ အိမ်ဆိုတာဘယ်လောက်နွေးထွေးတယ်ဆိုတာ..ဝေးဘူးမှသိမှာ...
တစ်ခုပဲ စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ် ချောမွေးနေ့ကိုကွန်မကောင်းလို့ဆုတောင်းမရေးလိုက်ရဘူး
ပျော်ရွင်ချမ်းမြေ့တဲ့ ဘ၀တစ်ခုကိုလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ. အောင်မြင်ပါစေဗျာ
နှင်းလည်း သီတင်းကျွတ်တုန်းက အိမ်ကို မပြန်နိုင်ဘူး။ အမေနဲ့ အဖေက ဖုန်းဆက်မေးတယ်။ ပြန်လာမလားတဲ့။ မချောဘလော့ခ် ထဲက အတိုင်းပဲ။ ဒီရုံးပိတ်ရက်တော့ ပြန်ဖြစ်အောင် ပြန်လိုက်ဦးမယ်။
မချောရေ..လေးလေး က အဲဒီသီချင်းကိုအရမ်းကြိုက်တာ။ လေးလေးအဖြစ်နဲ့လည်း တူတယ်။ အိမ်ကိုသတိရရင်လေ အဲဒီသီချင်းလေးနားထောင်သလို အဲဒီသီချင်းကြားရင်လည်း အိမ်ကိုအရမ်းသတိရတယ်။
ညီမလေးတို့ဘ၀တွေ အတူတူပါပဲမမရယ်....း((
hi may i introduce myself.i 'm zuezuezin.I want to fri with all.
အားလုံးနဲ.စကားပြောချင်ပါတယ် ခင်ရင်စာပြန်ပါနော် ဇူးဇူးခင်လို.ပါ....တာ.တာ.....